UGumede owayeyiMeya uthukuthele ugane unwabu ulwela ukusindisa impilo yakhe kwezepolitiki | Scrolla Izindaba
UGumede owayeyiMeya uthukuthele ugane unwabu ulwela ukusindisa impilo yakhe kwezepolitiki
Lowo owayeyiMeya yeTheku uZandile Gumede uthi amacala abhekene nawo “abuthaka” futhi “ahlobene nezepolitiki” njengoba elwa nokubuya ehlane lezepolitiki.
Ngesikhathi enengxoxo nabakwa-Scrolla.Africa, ngemuva kokuvela kwakhe enkantolo ngoLwesine, uGumede obedinwe egane unwabu ubuze ukuthi kungani uMbuso ufuna kuhlehliswe uma unecala eliqinile abhekene nalo.
“Akukho okuyoke kuphume kulokhu ngoba la macala ayindlela yokuzama ukungisusa. Abakatholi lutho ngami yingakho belokhu becela ukuhlehlisa,” kusho uGumede.
Ephikisana nokuhlehliswa, ummeli wakhe uJay Naicker uthe la macala azibhuntshise ngempumelelo izifiso zikaGumede zezepolitiki.
Lokhu kungemuva kokuthi iKomidi eliPhezulu le-ANC (NEC), okuyisigungu esiphezulu seqembu esithatha izinqumo, lathatha isinqumo ngoNcwaba sokuthi bonke abaphethe amahhovisi abhekene namacala kumele bashiye eceleni.
Ngemuva kwalokho, uGumede ubuye wabizwa njengeLungu lesiShayamthetho sesiFundazwe (MPL) KwaZulu-Natali ngoNcwaba, ngemuva nje kokuthunyelwa kwakhe.
“Ngicabanga ukuthi eqinisweni le nqubomgomo ‘yokushiya eceleni’ ihlukunyezwa ngabanye bozakwethu abayisebenzisayo ukuqeda labo abaphikisana nabo kwezepolitiki,” kusho uGumede.
UGumede uvele kanye nasolwa nabo abali-17, okubalwa nemenenja yedolobha uSipho Nzuza nonkosikazi wakhe uBagcinele, eNkantolo yamaCala ezohwebo eThekwini.
Amacala avela kwithenda yezigidi ezingama-R430 yeThekwini Solid Waste eyakhishwa ngesikhathi eseyiMeya yeTheku.
Walwa nalezi zinsolo, ethi ngaleso sikhathi wayeyinhloko yezepolitiki, futhi engenagunya lokuphatha.
Kodwa isiphathimandla sezokushushisa kuzwelonke (NPA) sinamathele izibhamu zayo zokuthi ubeyingxenye yenkohlakalo.
“Ngizolwela ukugeza igama lami ukuze ngiqhubeke nomsebenzi wami wokufukula abantu baseNingizimu Afrika. Akekho ozonquma ngesiphetho sami, ngaphandle kwami.”
Icala lakhe lihlehliselwe umhla zingama-23 kuNdasa kowezi-2021 okucasule ummeli wakhe othe ukuhlehliswa kwezinyanga ezine “akunangqondo”.
UNobhala-Jikelele we-ANC osolwa ngenkohlakalo uAce Magashule umemezele ngoLwesine ukuthi amalungu e-NEC anikeze abayisithupha kwi-ANC kuze kube uNhlolanja wonyaka ozayo ukuze aphothule lolu daba olubangwayo.
Okhulumela i-ANC uPule Mabe uthe, le nqubo ebekelwa eceleni isebenza kubo bonke abaphethe amahhovisi hhayi uGumede kuphela.
Ebuzwa ukuthi kungani uMagashule engacelwanga ukuthi aphume eceleni ngamacala akhe enkohlakalo, wenqabile ukuphawula.